Qaybo ka mid ah waraaqaha birta ah ee wax safeeya iyo kuwa alaabada siiya | Ouzhan
Nadiifinta birta xaashida iyo xoqidda geeddi-socodka xaashida qalabka saxan ee saxan
1. Nadiifintu waa in lagu xoqo dusha sare ee sheyga dusha sare leh ama filimka wax lagu duubo oo leh warbaahinta khilaafku ka jiro sida waraaqda ciida, boombada, budada dhagaxa fiican, iwm.
2. Nadiifintu waa hab farsameyn loo isticmaalo farsamooyinka, kiimikada ama saameynta korantada si loo yareeyo culeyska dusha sare ee qalabka shaqada si loo helo dusha sare ee dhalaalaya.
Doorka qalabka birta lagu nadiifiyo iyo qaybaha wax lagu shiido
- Mashiinka xoqidda ayaa marka hore kor u qaadi doona caabbinta duugga ah iyo u adkaysiga daxalka ee dusha caaryada, waxayna kordhin doontaa nolosha adeegga caaryada.
- Mindheynta caaryadu waxay hagaajin kartaa saxnaanta dusha caaryada, waxay ka hortageysaa jiilka burrs, waxayna yareyneysaa dhacdooyinka alaabada cilladaysan.
- Caaryada, nadiifinta waxay yareyn kartaa caabbinta xajmiga waxayna ka dhigeysaa alaabada caagga ah fududahay in la isku dhejiyo. Yaree wareegga wax soo saarka, hagaajinta waxtarka waxqabadka, iyo keydinta kharashyada shirkadaha.
- Warshadaha indhaha, nadiifinta caaryadu waxay la kulmi kartaa shuruudaha xirfadaha muraayadaha iyo bilicsanaanta qalabka shaqada ilaa heerka ugu weyn.
Faa'iidooyinka adeegga birta lagu nadiifiyo ee biraha Ouzhan
- Dhammaan geeddi-socodka xaaridda xaashida saxda ah iyo qashinku waxay ku xiran yihiin baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shay-baarayaal loogu talagalay birta saxda ah ee wax lagu nadiifiyo iyo wax lagu shiido.
Hore: OEM sheet goynta biraha biraha biraha
Xiga: Qaybaha birta xaashida qaybo nadiifiya
Black anodized 6061-T6 aluminium daawaha CNC machi ...